Sii-hayaha ra’iisul wasaaraha dalka Mahdi oo kormeeray dekedda Muqdisho +(SAWIRRO) | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Sii-hayaha ra’iisul wasaaraha dalka Mahdi oo kormeeray dekedda Muqdisho +(SAWIRRO)
Sii-hayaha ra’iisul wasaaraha dalka Mahdi oo kormeeray dekedda Muqdisho +(SAWIRRO)
Muqdisho (Halqaran.com) – Sii hayaha Ra’iisul Wasaaraha dalka, mudane Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar), oo ay wehliyaan sii hayayaasha wasaaradaha dekadaha iyo maaliyadda ayaa Talaadadii maanta kormeeray Dekadda Muqdisho.
Mahdi Maxamed Guuleed ayaa waxa uu maamulka dekadda faray inay laba jibbaaraan shaqooyinka ay Qaranka u hayaan.
Sii hayaha Ra’iisul Wasaaraha dalka ayaa kulan gaar ah la yeeshay Wasiirka Maaliyadda iyo maamulka Dekadda, waxaa uuna ka xog-wareystay qaabka ay u shaqayso dekaddu, caqabadaha ka jira iyo qaabka ugu wanaagsan ee loo tayayn karo adeegyada ay dekaddu u hayso shacabka Soomaaliyeed, lagana fogaado wax kasta oo keeni kara musuq maasuq iyo ku takrifal hanti dadweyne.
Wuxuu Sii-hayaha ra’iisul wasaaraha dalka, ayaa ku booriyey madaxda iyo shaqaalaha ka howlgala dekadda in ay ilaaliyaan mas’uuliyadda lagu aaminay, maadaama dowladda Soomaaliya uu ka dhacay Isbedel.
Ugu damebyn, Sii hayaha Ra’iisul Wasaaraha dalka, mudane Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar), ayaa xusay in aan la aqbali doonin in shaqsi gaar ah uu ku takri falo dhaqaalaha dowladda.
Mahdi Maxamed Guuleed, wuxuuna kula dar-daarmay maamulka cusub in ay derder-geliyaan shaqooyinka muhiimka ah ee shacabka Soomaaliyeed u hayso dekadda.
Sii hayaha xilka ra'iisul wasaaraha